ईर्ष्या - भित्र खान सक्नुहुन्छ टाढा यसको मालिक एक गरिब गुणस्तर। यहाँ अरूको सफलता को बस डाह फरक हुन सक्छ छन्। ईर्ष्या देखिने बाहेक सधैं आफ्नो सफलता हासिल गर्न ठूलो प्रेरणा बन्न सक्छ। करीना Dobrotvorskaya बस जस्तै डाह गराउँछ र एकै समयमा हामीलाई आफ्नै क्यारियर र व्यक्तित्व को संभावनाहरु सोच्न बनाउँछ जो एक व्यक्ति छ। के यसको बारेमा विशेष छ? यो गर्व र सफल महिला - त्यो कसले हो?
बाल्यकाल को एक संक्षिप्त इतिहास
करीना Leningrad, सेप्टेम्बर 25, 1966 मा ईन्जिनियरहरु को एक परिवार मा जन्म भएको थियो। यसको बीचमा हामी निष्कपटता, समर्पण, को naturalness र असल बेहोरा सराहना। किन आमाबाबुले छन् बच्चाहरु आफ्नो छोरी उचित शिक्षा प्राप्त सुनिश्चित गर्न सबै गरे छ, politeness, समयबद्धता सिकें र एक वास्तविक aristocrat हुन्छन्। तिनीहरूले थप कार्यरत शिक्षकहरू नैतिकता र सौंदर्य सिकाउन छन्, कला त्यसैले समाजमा व्यवहार गर्न, र सिकाउनुभयो। डी
त्यो जवान करीना कहाँ अध्ययन?
लगत्तै उच्च विद्यालय करीना Dobrotvorskaya कागजातहरू दायर र सजिलै सेन्ट पीटर्सबर्ग मा थिएटर कला को एकेडेमी प्रविष्ट गर्नुभयो। त्यहाँ नाटक को संकाय मा, त्यो Academia संग, भेट पश्चिमी थिएटर को इतिहास समीक्षा र सबै रचनात्मक पेशों (अभिनेता, निर्देशक, Screenwriter) बारे एक सामान्य विचार प्राप्त।
कूटक को एकेडेमी देखि स्नातक पछि उहाँले स्नातक स्कूल प्रवेश कला इतिहास LGITMiK विभाग को र पछि कलामा उनको पीएचडी काम बचाव।
आफ्नो पहिलो काम करीना Dobrotvorskaya त्यो प्रशिक्षित थियो जहाँ पहिले LGITMiK मा प्राप्त। त्यहाँ, त्यो एक शिक्षण स्थिति पश्चिमी थिएटर को एक सानो इतिहास प्रस्ताव थियो। को हेरोइन अनुसार, त्यो यस्तो प्रस्ताव धेरै चापलूसी देखिन्थ्यो, र यो, बिना हिचकिचाहट सहमत छ।
काम र क्यारियर शब्द मा सुरु
केही समय पछि, असाधारण नेतृत्व विकास संग एक केटी प्रकाशन "Kommersant-दैनिक» को मुद्रित संस्करण मा देख्यो। पहिलो पटक हाम्रो हेरोइन एक पत्रकार र संवाददाता रूपमा काम गर्न थाले जहाँ कि छ। यहाँ त्यो लेखिएका र फिलिम र थिएटर बारेमा लेख Entertaining धेरै प्रकाशित गरेको छ।
एक प्रतिभाशाली लेखक को संभावनाहरु देखेर, "रूसी टेलीग्राफ" शाब्दिक लालच केटी भनिन्छ अर्को अखबार को संस्करण उनको स्थिति स्तंभकार र सम्पादक प्रतिज्ञा दिइसकेपछि।
अझै पनि पछि Dobrotvorskaya करीना Anatolevna समयमा लोकप्रिय पहिलो उप सम्पादक को ठाउँमा निमन्त्रणा गरिएको थियो, फिल्म Premiere को रूसी संस्करण। प्रारम्भिक 1998 मा, त्यो फेरि काम उनको ठाउँमा परिवर्तन र वोग चमकदार पत्रिका को रूसी संस्करण को उप प्रमुख सम्पादक को पोस्ट गरे।
मध्य-2002 मा करीना फेरि क्यारियर सीढी सारियो वास्तुकला डाइजेस्ट पत्रिका रूसी प्रतिनिधित्व को मुख्य सम्पादक को खाली स्थिति लिए। र प्रारम्भिक 2005 मा Dobrotvorskaya प्रकाशित घर CONDE Nast, त्यो प्रकाशन घर को एक ठाउँ सम्पादकीय निर्देशक प्रतिज्ञा थिए जहाँ मा सारियो। तीन वर्ष पछि, करीना Anatolevnu नै संगठनको अध्यक्ष पदोन्नत। क्षणमा यो CONDE Nast को रूसी प्रतिनिधित्व मा एक प्रमुख खम्बा मालिक हो।
केही संस्करणहरु मा आफ्नो सामाग्री करीना प्रकाशित?
थिएटर र सिनेमा - आफ्नो क्यारियर गति प्राप्त छ महिनामा करीना Dobrotvorskaya उनको दुई मनपर्ने विषयहरू सम्बन्धित 300 भन्दा बढी सामाग्री लेखे र प्रकाशित। लेखकको काम, निम्न पत्रिका द्वारा सराहना थिए जो प्रकाशन घरहरू र प्रकाशनहरू, बीच:
"सिनेमा को कला";
"सेन्ट पीटर्सबर्ग थिएटर पत्रिका";
पनि एक पत्रकार सामाग्री धेरै anthologies र पत्रिकाहरू LGITMiK "Kommersant-दैनिक», «रूसी टेलीग्राफ" र "साहित्य राजपत्र" मा रिपोर्ट गरिएको छ।
आफ्नो journalistic गतिविधिहरु बाहेक, हाम्रो हेरोइन साहित्यिक कार्यमा संलग्न छ। त्यसैले, त्यो लेखे र एकैचोटि दुई पुस्तकहरू प्रकाशित: "कब्जाको केटी" र "कसैले देखेको छ मेरो सानो केटी? सर्गेई 100 अक्षरहरू। "
पहिलो काम मा लेखक घेर Leningrad बासिन्दाहरू एक महत्त्वपूर्ण विषय उठाएको र दोस्रो उनको पहिलो, भर्खरै पतिको जीवन देखि प्रस्थान संग उनको सम्बन्ध वर्णन गरे। यहाँ एक त्यो हो - पूर्ण, विकास निष्कपट र अप्रत्याशित करीना Dobrotvorskaya। पहिलो बुक र दोस्रो प्रेम, मित्रता, विश्वासघात र घृणा को मानव मान बारेमा बताउनुहोस्। अचानक, लेखक आफूलाई लागि, दुवै काम राम्रो विक्रेता बनेका छन्।
पुस्तक बारे संक्षिप्त जानकारी, "कसैले मेरो सानो केटी देखेको छ? सर्गेई 100 अक्षर "
यो पुस्तक हेरोइन आफ्नो पूर्व पति सहवास समयमा महसुस कि सबै अनुभव को साहित्यिक भाषा वर्णन गर्न सकेसम्म Kareena लागि स्वीकार एक प्रकारको भएको छ। सबै आत्मकथात्मक उपन्यास संग्रह एक प्रकारको छ किनभने काम को शीर्षक पत्रहरूमा गल्ति उल्लेख छैन प्रेम पत्र र लेखक को अब मृतक पतिको सम्बोधन टिप्पणीहरू।
वास्तविकता मा सम्बन्ध Sergey र करीना
Sergey Dobrotvorsky र करीना - पुस्तकको मुख्य वर्ण, आफ्नो आपसी मित्र अनुसार, Bohemian पीटर्सबर्ग 90 को दशक सबैभन्दा सुन्दर जोडी थिए। उहाँले एक प्रसिद्ध लेखक, फिलिम आलोचक र बौद्धिक थियो, र त्यो बस यसलाई प्रेम गर्नुभयो।
तर आफ्नो सम्बन्ध केही दीर्घकालीन परिणत गर्न किस्मत कहिल्यै थियो - र यो सबै तिनीहरूले सिद्ध प्रेम, आपसी सम्मान, साधारण चासो, महिमा थियो जस्तो देखिन्छ। खैर, लेखक आफ्नो पुस्तकमा बताउँछन् जो केही कारण लागि, तिनीहरू parted। फलस्वरूप, करीना शाब्दिक एक पूर्ण बिभिन्न शहरमा आफ्नो प्रिय पत्नी देखि भाग्नु थियो। Sergey सेन्ट पीटर्सबर्ग मा बसे, र ठीक एक महिना पछि मृत्यु भयो।
आफ्नो पुस्तक मा, करीना छैन, केवल आफ्नो अनुभव वर्णन गर्छ। यसलाई आफ्ना प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ र आफ्नो जीवनकालमा त्यो अघि पूरा गर्न सकेन आफ्नो मनपर्ने भन्दै बताए। आलोचकहरु अनुसार, उपन्यास सबै आशा surpassed छ। उहाँले एक अप्रत्याशित प्रकाश businesswoman फलाम, त्यसैले अक्सर सम्बन्धित छ जो Dobrotvorskaya करीना भयो। जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, यस लेखमा वर्णन यो बलियो स्त्रीको क्यारियर।
आज व्यक्तिगत जीवन करीना
छोरी सोफिया र छोरा इवान: अहिले, Alekseem Tarhanovym गर्न करीना विवाहित र दुई छोराछोरी छन्। त्यो, अझै पनि सिनेमा रुचि छ आफ्नो काम प्रेम, र चित्रकला उठाउँछ र साँचो मित्रता मूल्यांकन गर्छौं। सफल महिला प्रशंसक, सहायक र विश्वसनीय साझेदार धेरै गर्छन्।
Irina Meladze: छोडपत्र पछि जीवन छ?
Shirli Makleyn: अभिनेत्री को जीवनी र Filmography
खाली संगठन - यो ... खाली संगठन: परिभाषा, कार्य र गतिविधि को सुविधाहरू
Nha Trang Vinpearl Resort (भियतनाम): विवरण र होटल को फोटो